Leverage Forex | Inona no Margin sy Leverage amin'ny Forex, Mianara miaraka amin'ny FXCC
Fanampim-panafody & margin
Ny mpivarotra rehetra dia mampiasa vola indramina amin'ny fomba iray na hafa mba hampitomboana ny fiverenan'ny vola azo. Matetika ireo mpampiasa vola dia mampiasa kaonty maritiana rehefa te hampiasa vola amin'ny tahiry na vola izy ireo, mampiasa vola "nindrana" tamin'ny broker mba hifehezana toerana lehibe manomboka amin'ny renivohitra kely.
Azon'izy ireo atao ny mametraka risika kely fotsiny nefa mividy be dia be, raha tsy izany dia tsy ho zakan'izy ireo izany. Ny sisiny amin'ny Forex dia lohahevitra iray lehibe ho an'ireo mpivarotra vao. Noho izany, manolo-kevitra ny hiditra amin'ny Forex izahay ary hamantatra amin'ny antsipiriany ny zava-drehetra.
Inona ny maridre Forex amin'ny teny tsotra?
Raha tsy miditra amin'ny antsipiriany ianao, ny maridre Forex dia ny habetsaky ny herin'ny fividianana broker izay manome anao hanohitra ny vola apetrakao.
Ny varotra margana dia ahafahan'ny mpivarotra mampiakatra ny haben'ny toerany voalohany. Saingy tsy tokony hohadinointsika fa sabatra roa lela io, satria mampitombo ny tombom-barotra sy ny fatiantoka. Raha diso ny vinavinan'ny vidiny, ho foana ao anaty indray mipy maso ny kaonty Forex satria mivarotra volabe isika.
Fa maninona no zava-dehibe ho an'ny mpivarotra Forex?
Ny mpivarotra dia tokony hijery ny maridrefy amin'ny Forex satria milaza amin'izy ireo raha manana vola ampy hanokafana toerana fanampiny izy ireo na tsia.
Ny fahatakarana tsara kokoa ny sisiny dia tena zava-dehibe amin'ny mpivarotra raha miditra amin'ny varotra Forex azo ampiasaina. Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fifanakalozana amin'ny maritiana dia manana tombony lehibe hahazoana tombony sy fatiantoka. Noho izany, ny mpivarotra dia tokony hampahafantatra ny tenany amin'ny sisiny sy ireo teny mifandraika amin'izany toa ny antso an-tsisiny, ny haavon'ny sisiny sns.
Inona ny haavon'ny sisiny?
Ny margin dia ny isan-jaton'ny vola napetrakao izay efa nampiasaina tamin'ny varotra. Hanampy anao hahita ny vola ampiasaina sy ny vola sisa tavela amin'ny varotra bebe kokoa.
Inona ny maridre maimaim-poana amin'ny Forex?
Ny fividianana maimaim-poana dia ny herin'ny fividianana varotra. Ny maridre maimaimpoana dia kajy ho toy ny mampihena ny sisin-tany ampiasaina amin'ny sisiny manontolo.
Eritrereto hoe manana $ 8000 amin'ny mizana aho. Amin'ny varotra misokatra dia $ 2500 no mindrana. Ny sisin-tany malalaka dia $ 8000 - $ 2500 = $ 5500. Raha manandrana manokatra fifanarahana izay tsy dia misy vola maimaimpoana ianao dia ho foana ny kaomandy.
Ahoana no ifandraisan'ny leverage sy ny margin?
Leverage sy margin dia lafiny roa amin'ny farantsakely iray ihany. Raha ny maritiana no vola kely indrindra takiana hametrahana varotra araraotina, ny leverage dia fitaovana iray ahafahan'ny mpivarotra mifindra toerana marobe izay tsy ho takatry ny volany amin'ny vidin'ny 1: 1. Ny tombony dia ny "fahefana ara-barotra mitombo" misy rehefa mampiasa kaonty march Forex. "Placeholder" virtoaly izy io amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny zavatra ananantsika sy izay tiana hiasa.
Ny fampiasana dia matetika aseho amin'ny endrika "X: 1".
Noho izany, te-hifanakalozana USD / JPY marobe tsy misy sisiny aho. Mila $ 100,000 amin'ny kaontiko aho. Fa raha 1% fotsiny ny fepetra takiana amin'ny margin, dia mila $ 1000 fotsiny aho amin'ny fametrahana. Ny tombony, amin'ity tranga ity, dia 100: 1.
Miaraka amin'ny 1: 1 hampiasa ny dolara tsirairay ao amin'ny kaontinao ka manara-maso ny dollar amin'ny varotra 1
Miaraka amin'ny 1: 50 hampiasa ny dolara tsirairay ao amin'ny kaontinao ka manara-maso ny dollar amin'ny varotra 50
Miaraka amin'ny 1: 100 hampiasa ny dolara tsirairay ao amin'ny kaontinao ka manara-maso ny dollar amin'ny varotra 100
Inona no atao hoe antso an-jorony, ary ahoana no hisorohana azy?
Fiantsoana sisin-tany no mitranga rehefa lany ny maridrezy maimaimpoana ny mpivarotra. Raha misy vola kely napetraka noho ny takiana amin'ny fehezan-dalàna, dia mihidy ho azy ny varotra misokatra amin'ny Forex. Ity dia rafitra iray mametra ny fatiantoka ary ny mpivarotra dia tsy hahavery mihoatra ny vola napetraka. Afaka misoroka ny antso an-tsisiny ny mpivarotra raha mampiasa am-pahendrena ny sisiny. Tokony hametra ny haben'ny toerany araka ny haben'ny kaontiny izy ireo.
Ahoana ny fomba hahitana ny marge amin'ny terminal MT4?
Azonao atao ny mahita ny margène, ny marcé maimaimpoana ary ny haavon'ny sisiny eo am-baravarankely. Ity varavarankely ity ihany no isehoana ny fifandanjana sy ny fitoviana.
Fikajiana ny be indrindra amin'ny varotra sisiny
Ny haben'ny Forex fenitra dia vola 100,000 100. Miaraka amin'ny tombony 1: 1000, ny petra-bola rehetra $ 100,000 ao amin'ny kaonty ara-barotra dia manome anao vola mividy $ XNUMX. Ny broker dia mamela ny mpivarotra hanary an'io arivo zato io, raha misy tena iray alina ao amin'ny petra-bola.
Ohatra, raha hividy singa vola 10,000 amin'ny 1.26484 isika miaraka amin'ny fampiatrarana 400: 1, dia hahazo 31 $ kely amin'ny sisiny takiana isika. Ity no "collateral" faran'izay kely indrindra amin'ny fanokafana varotra amin'ny Forex.
Ohatra amin'ny varotra sisiny
Andao lazaina fa ny mpivarotra dia manokatra kaonty miaraka amin'ny mpivarotra manana tombony 1: 100. Manapa-kevitra ny hanao varotra ny mpivarotra vola EUR / USD izy; izany hoe mividy amin'ny euro izy amin'ny dolara amerikana. Ny vidiny dia 1.1000, ary ny refy mahazatra dia 100,000 100,000 €. Amin'ny varotra mahazatra dia tokony hametraka 1 100 ao amin'ny kaontiny izy hanokafana varotra. Fa ny fifanakalozana ampaham-bidy amin'ny 1000: XNUMX dia $ XNUMX fotsiny no ampidiriny ao amin'ny kaontiny.
Manombana ny fiakarana na fidinan'ny vidiny dia manokatra varotra lava na fohy izy. Raha mandeha ny vidiny dia mahazo tombony ilay mpivarotra. Raha tsy izany dia mety mihoatra ny vola apetrakao ny fihenan-tsasatra. Hikatona ny fifanarahana, very vola ny mpivarotra.
Mazava ho azy, ny varotra sisiny dia fitaovana mahasoa ho an'ireo izay mitady hanao varotra Forex miaraka amina renivohitra fanombohana voafetra. Rehefa ampiasaina tsara dia mampiroborobo ny fitomboana tombony haingana ny varotra ampiasana ary manome toerana bebe kokoa amin'ny fanamorana portfolio.
Ity fomba fifanakalozana ara-barotra ity koa dia mety hampitombo ny fatiantoka ary mety hampidi-doza fanampiny. Noho izany, nanatsoaka hevitra izahay fa tena sarotra ny miditra amin'ny tsena tena izy nefa tsy mahafantatra ny fiasa amin'ny Forex.
Avo loatra ny mety hahavery ny vola rehetra. Raha ny momba ny vola crypto sy ny fitaovana hafa miovaova, toy ny metaly, ireo mpivarotra efa za-draharaha ihany izay mazàna manana ambaratonga tsara sy antontanisa mahomby no afaka miditra eto.
Etsy andanin'izany, hahaliana ny mahafantatra raha tianao ny Forex, raha tianao ny mifanakalo varotra amin'ny leveraged fund, ary inona no tombony tianao indrindra.